FAA waxay ku qasabtaa Verizon iyo AT&T inay joojiyaan soo-bandhigidda 5G oo buuxa
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » FAA waxay ku qasabtaa Verizon iyo AT&T inay joojiyaan soo-bandhigidda 5G oo buuxa
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
FAA waxay ku qasabtaa Verizon iyo AT&T inay daahiyaan soo bixitaan buuxa oo 5G ah.
Maamulka Duulimaadyada Federaalka ayaa ka digaya in ku balaadhinta xaddi xaddidaneed gaar ah ay si dhab ah u faragelin doonto xargaha loo isticmaalo badqabka diyaaradda.
Diseembar 5 ee la qorsheeyay ee soo noqnoqoshada C-band ayaa dib loo dhigi doonaa ilaa ugu yaraan Janaayo 5.
Verizon iyo AT&T waxay rajeynayaan inay la shaqeeyaan FAA si ay wax uga qabtaan walaaca ay ka qabaan faragelinta suurtagalka ah ee qalabka badbaadada qolka fadhiga.
Safarka hawada ee Mareykanka ayaa mar horeba waxaa la kulmaya dhibaatooyin beryahan dambe, iyada oo rabitaanka faafitaanka kadib ee duullimaadyadu ay ka soo horjeedaan shaqaalaha iyo yaraanta duuliyaha.
Verizon iyo AT & TQorshaha 5G ee la qorsheeyay ee Diseembar 5, oo bixisa "xawaaraha-wanaagsan-ilaa-weyn" ee dhex-dhexaadinta inta jeer ee raadiyaha, ayaa dib loo dhigay ka dib FAA ayaa ka digay in balaarinta xajmiyeedka qaarkood ay si ba'an u faragelin doonto xadhkaha loo isticmaalo bixinta badbaadada diyaaradaha ganacsiga.
Soo-bandhigista buuxa ee soo noqnoqoshada C-band ayaa dib loo dhigi doonaa ugu yaraan Janaayo 5, AT&T iyo Verizon ku dhawaaqay.
Shirkaduhu waxay rajeynayaan inay la shaqeeyaan Maamulka Duulimaadyada Federaalka si ay wax uga qabato welwelkeeda ku saabsan faragelinta suurtagalka ah ee qalabka badbaadada qolka duulista ee sidoo kale isticmaala band C.
In kasta oo shirkaduhu ay bixiyeen isku-darka $ 70 bilyan si ay u helaan C-band xaraashka horraantii sanadkan, warshadaha duulista ayaa ka mudaaharaaday isticmaalkeeda, iyaga oo ku doodaya in " carqaladayn weyn oo isticmaalka Nidaamka Hawada Qaranka la filan karo " waa haddii Bixiyeyaasha waxay ku helayaan dib-u-eegis bandwidth-kaas 5G.
Shirkaduhu waxay horeba u lahaayeen isku xidhka 5G xawaarihiisu sarreeyo ee kooxo sare, halkaas oo ay isticmaalaan tignoolajiyada hirarka millimitirka ah, iyo soo noqnoqoshada band-yar, kuwaas oo si muuqata u gaabis ah. In kasta oo ayan ahayn labada shirkadood ee kaliya ee soo saaraya 5G, tartamayaashooda T-Mobile ayaa durba la qabsaday qayb weyn oo ka mid ah koox-kooxeedyo aan wali (wali) ku shaqayn C-band.
Warshadaha diyaaradaha ayaa sida muuqata in muddo ah isku dayayay in ay soo jiitaan dareenka shirkadaha taleefoonada, iyagoo bishii Ogosto kulan la qaatay guddiga isgaarsiinta ee dowladda federaalka si ay uga digaan isku dhacyada soo socda ee labada aag. Haddii aan wax la qaban, waxay ka digeen, ' carqaladayn weyn' ayaa la filan karaa, taas oo ku qasbeysa FAA in 'si aad ah loo yareeyo awoodda hawlgelinta duulista.'
Ka dib markii ay ku guuldareysteen inay dadka kale ka dhaadhiciyaan deg degga ah ee arrinta, FAA ayaa sii daayay 'warbixin macluumaad gaar ah' horaantii usbuucan oo qeexaya faragelinta 5G ee suurtagalka ah ee qalabka badbaadada diyaaradda taas oo ku xiran helitaanka altimeters raadiyaha. Ilaa todobaadkan, wakaaladdu waxay qorshaynaysay inay soo saarto amarro rasmi ah oo xaddidaya isticmaalka nidaamyada iswada, oo ay ku jiraan mid ka caawiya duuliyayaasha duulista iyo dhulka cimilada xun. Mamnuucidda waxaa loogu talagalay inay ka hortagto faragelin kasta oo ka timaadda calaamadaha 5G ee ku xad-gudbinaya xajmigooda, iyadoo hawl-wadeennada 5G la filayo inay sii daayaan tignoolajiyadooda 5-ta Disembar dhammaan suuqyada 46.
Iyadoo la qirayo inaysan jirin wax arrimo ah oo ku saabsan 'faragelinta waxyeellada leh' ee 5G ee wadamada kale, duuliyeyaasha ayaa looga digay inay 'u diyaargaroobaan suurtogalnimada in faragelinta 5G-ga iyo tignoolajiyada kale ay sababi karto in qalabka badbaadada qaarkood ay xumaadaan,' iyagoo soo jeedinaya in lagu qasbay in la xalliyo arrimaha 'waxay saameyn kartaa howlaha duulimaadka.'
Kooxda ganacsiga Wireless-ka ah ee CTIA ayaa ku adkaysatay in shabakadaha 5G ay si badbaado leh u isticmaali karaan spectrum-ka, iyaga oo tilmaamaya 40 wadan oo ay isku mar ku shaqaynayeen kombiyuutarada badbaadada diyaaradaha.
Safarrada hawada ee Mareykanka ayaa mar horeba waxaa la kulmaya dhibaatooyin beryahan dambe, iyada oo rabitaanka faafitaanka ka dib ee duullimaadyada uu ka horimaanayo shaqaalaha iyo yaraanta duuliyaha. Yaraantan waxaa sii xumeeyay balaarinta waajibaadka tallaalka ee dalka oo dhan.